Amanqaku kaVirginia Jacko Martech Zone |
Amanqaku ngu UVirginia Jacko
Kubaphathi bewebhusayithi kumashishini amaninzi, amakhulu namancinci, kweli xesha liphelileyo kwakubusika bokungoneliseki kwabo. Ukuqala ngo-Disemba, uninzi lweegalari zobugcisa kwisiXeko saseNew York zathiywa amatyala, kwaye iigalari zazingezodwa. Amakhulu amakhulu amatyala sele efakwe kutshanje ngokuchasene namashishini, amaziko enkcubeko, amaqela enkxaso kwanezinto eziphambili ze-pop uBeyonce, ogama lakhe lewebhu labizwa kwisimangalo sokwenza iklasi ngoJanuwari. Ngaba sesichengeni abanaso ngokufanayo? Ezi webhusayithi zazingekho